बागलुङको ताराखोलामा बस दुर्घटना,दुईको घटनास्थल मै मृत्यु » खबरहरुको एउटै केन्द्र
बागलुङको ताराखोलामा बस दुर्घटना,दुईको घटनास्थल मै मृत्यु
बिहीबार, जेष्ठ ३१, २०७५ १६:५१ मा प्रकाशित !
बागलुङ । बागलुङमा दुर्घटना हुदाँ दुईको घटनास्थल मै मृत्यु भएको छ । बिहीबार बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाको अर्गलमा भएको दुर्घटनामा दुईको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो ।
प्रहरीले जानकारी गराए अनुसार ताराखोला गाउँपालिका ३ का २४ वर्षीय हेमन्त घिमिरे र सोही ठाउँका ५४ वर्षीय हरिराम गिरीको मृत्यु भएको हो । बिहीबार दिउँसो घुस्मेली देखि अर्गल भातखाने डाडाँ जाबागलुङ । बागलुङमा दुर्घटना हुदाँ दुईको घटनास्थल मै मृत्यु भएको छ । बिहीबार बागलुङको ताराखोला गाउँपालिकाको अर्गलमा भएको दुर्घटनामा दुईको घटनास्थल मै मृत्यु भएको हो ।
प्रहरीले जानकारी गराए अनुसार ताराखोला गाउँपालिका ३ का २४ वर्षीय हेमन्त घिमिरे र सोही ठाउँका ५४ वर्षीय हरिराम गिरीको मृत्यु भएको हो । बिहीबार दिउँसो घुस्मेलीदेखि अर्गल भातखाने डाडाँ जादै गरेको ग १ ज ६०३४ नम्बरको गाडी दुर्घटना भएको हो ।
यस दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका २४ वर्षीय घिमिरे वडा सदस्य पनि हुन् । त्यस्तै दुर्घटनामा ताराखोला गाउँपालिका – ३ का २७ वर्षीय जीप चालक डम्बरबहादुर घिमिरे र सोही ठाउँका ४२ वर्षीय कर्ण भण्डारी घाईते भएका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी नायव उपरीक्षक विश्वराजसिहं थापाले जानकारी गराए अनुसार घाइते दुवैलाई उपचारका लागि गलकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरिचौर लगिएको छ ।दै गरेको ग १ ज ६०३४ नम्बरको गाडी दुर्घटना भएको हो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी नायव उपरीक्षक विश्वराजसिहं थापाले जानकारी गराए अनुसार घाइते दुवैलाई उपचारका लागि गलकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरिचौर लगिएको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: सरकारले संविधानको भावनालाई हरेक स्थानमा कुल्चिँदै गएको छ:मिनेन्द्र रिजाल
NEXT POST Next post: विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सत्ता पक्ष सांसदकै आलोचना
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते बिहीबार, जेष्ठ ३१, २०७५ १६:५१
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस बिहीबार, जेष्ठ ३१, २०७५ १६:५१
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण बिहीबार, जेष्ठ ३१, २०७५ १६:५१
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी बिहीबार, जेष्ठ ३१, २०७५ १६:५१
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? बिहीबार, जेष्ठ ३१, २०७५ १६:५१